अब वडाबाटै नागरिकता बनाउन पाइने, कहिले देखि बनाउन पाइन्छ ? - Mitho Khabar
May 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on अब वडाबाटै नागरिकता बनाउन पाइने, कहिले देखि बनाउन पाइन्छ ?
अब नागरिकता बनाउन जिल्ला धाउन नपर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहबाटै नागरिकता दिने व्यबस्था मिलाउन लागेको छ ।सोमवार गृह मन्त्रालयमा गृह सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले व्यक्तिगत विवरण लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न लागि वडास्तरबाटै नागरिकता दिने तयारी थालेको बताएका हुन् ।
जन्मदेखिका सबै विवरणहरूको तथ्यांकसहितको विशेष कार्ड उपलब्ध गराएर त्यसैका आधारमा स्थानीय तहबाटै नागरिकता बनाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
‘हामीले नागरिकतालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सबैभन्दा उत्कृष्ट विषयलाई कार्ययोजनामा ल्याएका छौं,’ सचिव पाण्डले भने ।
अहिले खुला सिमानाका कारण नागरिकताको विषय उठेता पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रविधिमैत्री विधि अपनाउन लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।
‘नागरिकता खुला सिमानाका कारणले गर्दा चु’नौती पनि छ तर नागरिकता नदिँदा अझ सम’स्या थपिन्छ, त्यसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोडेका छौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
अहिले वंशजको नागरिकताका सम’स्याहरू देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न र तथ्यांक केन्द्रीकृत गरेर केन्द्रबाट पनि निगरानी राख्नको त्यस्तो गर्न लागेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो पनि : भौतिक पूर्वाधारको अभावमा इस्लामिक शिक्षा दिँदै आएको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको एउटा मद्रसा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
८ कक्षाभन्दा माथि पढ्न अर्को विद्यालयमा जानुपर्ने भएपछि पढाइको उद्देश्यमा पूर्णविराम लागेको छ नै, दिनप्रतिदिन विद्यार्थी घट्ने क्रम तीव्र छ । जामे मस्जिदभित्र रहेको मद्रसा बचाउन सञ्चालकले अपिल गरेका छन् ।
नेपाल जामे मस्जिदमा हरेक दिन ५ पटक अजान गरिन्छ र प्रार्थनाको लागि यसरी नै संकेत गरिन्छ । यही मस्जिद परिसरमा रहेको यो मद्रसा इस्लामिया विद्यालय जहाँ मुश्लिम समुदायका विद्यार्थीको पढाइ हुन्छ ।
भविष्यमा नमाजका लागि योग्य बनाउन कक्षाको सुरुवातमा विद्यार्थीलाई अजान गराइन्छ । सरकारी विद्यालय भन्दा केही फरक विषय उर्दू, कुरान, अरबी, दिनियात जस्ता विषयको यहाँ पठनपाठन गराइन्छ ।
नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्म मात्रै पढाइ हुने यस विद्यालयमा हाल १ सय ८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा ५९ बालक र ४९ बालिका छन् ।अपवादका रूपमा एकजना भने गैर मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी छन् । विद्यालयमा भौतिक संरचना अभावका कारण थप कक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा विद्यालय प्रशासन चिन्तित छ ।
९ र १० कक्षा पनि थप गर्नका खेलमैदान बाहेक अन्य आवश्यक भाैतिक संरचना र जनशक्ति तयार रहेकाे भन्दै सरकारकाे अनुमतिकाे मात्र प्रतिक्षामा रहेकाे मद्रसा इस्लामिया विद्यालयका प्रधानाध्यापक फिराेज खान बताउनुहुन्छ । विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यक्रम अरु विद्यालयसरह भए पनि उर्दू र अरबी भाषा अनिवार्य गरिएको छ ।
अझ रोचक त के छ भने, विद्यालयको दोस्रो तलामा ११ जना विद्यार्थीले नाजरा र हिट्ज पढ्ने गरेका छन् । जसअन्तर्गत कुरानको ३० अध्याय मुखले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३० अध्याय पूरा गर्ने विद्यार्थी मस्जिदमा नमाज पढ्न सक्षम हुन्छन् । नाजराका लागि विद्यालयमा रहुन्जेल अर्थात कुरान कण्ठ नहुन्जेल १० वर्ष माथिका विद्यार्थी परिवारबाट टाढा विद्यालयमै बस्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
यसरी मुस्लिम समुदायलाई केन्द्रित गरेर स्थापना गरिएको मद्रसा विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक मुस्लिम नै रहेका छन् । आफू अध्ययन गरिरहेको विद्यालयमा थप कक्षा नहुँदा अध्ययनको लागि अन्य विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीलाई चि’न्तित बनाएको छ ।
‘८ कक्षा पढेपछि पूर्णविराम लाग्छ, १० सम्म पढ्न पाए हुन्थ्याे,’ कक्षा ८ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थी भन्छिन्, ‘अन्य विद्यालय जाँदा हामीलाई त्याे वातावरणमा घुलमिल हुनै समय लाग्छ, समस्या पनि हुन्छ, १० कक्षासम्म यहाँ पढेर जान पाए अलि ठूला पनि भइन्थ्याे ।’
राजधानी काठमाडौंमा रहेको इस्लामिक विद्यालय भौतिक संरचनाको अभावमा विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने बा’ध्यता आफैंमा न्यायोचित होइन । यसलाई सुसाधन सम्पन्न बनाई विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहजता ल्याउने तर्फ पहलकदमी हुन जरुरी छ ।
नगरकोटको त्यो एक रात…. !
लाइसेन्स लिन चाहनेहरुको लागि आयो खुशिको खबर !
कोरोना त्रास : रक्तदान गर्न दाता डराए, बजारमा रगतको अभाव
कोरोना प्रभावः ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन र परीक्षा स्थगित
June 28, 2022 mithokhabar